Gali Instagram Adigoon Xaqiijin Aqoonsiga ➡️ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
March 15, 2021 January 28, 2019 by Akhristayaasha Shabakada
Koodhadhka caddaynta ayaa madax xanuun kuu noqon kara. Tan iyo, waa cajiib in tani ay tahay dhibaato baahsan ee codsiyada kala duwan. Waana shabakada caanka ah ee bulshada Instagram, ayaa leh dhibaatada noocan ah ee saameysay isticmaaleyaal badan, kuwaas oo arka sida akoontoodu u xannibantahay iyadoon waxba laga qaban karin. Laakiin si fiican waxaa jira laba qaab oo aad u fudud Si aad u xalliso xaaladdaada. Midka hore waa inuu galo Instagram oo aan lahayn lambar xaqiijin oo kan labaadna waa in lagu qasbo imaatinka koodhka. Labada xaaladoodba natiijadu waa isku mid. Laakiin sidoo kale waa muhiim inaad taas ogaatid Koodhadhka xaqiijinta maahan wax xun.
Waa maxay lambar xaqiijin?
Koodhadhka xaqiijinta ayaa ah xeeladaha amniga kuwaas oo adeegsada e-maylka iyo aaladaha warbaahinta bulshada, iyada oo loo marayo SMS waayo, kuxi koontadaada lambarka taleefankaaga. Sidan, haddii qof doonayo inuu galo xisaabtaada, marka lagu daro inuu haysto lambarkaaga sirta ah (haddii aad heshay) waa inaad haysataa taleefankaaga gacanta, haddii kale ma heli doontid. Laakiin mararka qaarkood kuwan lambarrada xaqiijinta, waxay caqabad ku noqon karaan inay ku hayaan Instagramkaaga ama shabakad kale oo bulsho.
Waa maxay sababta ay dhibaatooyin uga jiraan nambarada xaqiijinta ee kujira Insagram?
Sababaha ay tani u dhacaan waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay mid isagu iska leeyahay habka amniga madal ee Instagram. Taas oo mararka qaar ku xira emailkaaga taas oo ah a koontada jirta ama dib u wareejinta macluumaadka aad ku dartay. Sidoo kale, dhibaatadu adiga lafteeda ayay iyadu asal ahaan ka soo jeedin lahayd, adigoo soo bandhigaya qaab qaldan lambarkaaga taleefanka. Kadib, waxaad raadin doontaa hab aad ku gasho Instagram adigoon xaqiijin lambar koodh. Labada xaaladoodba xalalku waa isku mid.
Waa habboon tahay inaad ogaato, in Instagramku mudnaanta koowaad ku siinayo xaqiijinta emaylka marka firfircoonaan ayaa laga shakiyi karaa iyo wakhtiyo kale diri lambarrada xaqiijinta Waxaa laga yaabaa in aysan imaan. Si aad u xalliso dhibaatadan raac talooyinkaan.
Hubso in lambarka aad gelisay ay sax tahay, haddii ay sidaas tahay, hubi in uu shaqeynayo si aad u hesho lambar xaqiijinta. Haddii tani shaqeyn weydo, isku day lambar kale oo aad heli karto Tan darteed, waa inaad badashaa lambarka aad adigu ku jirto Koontada Instagram. Waxaa lagugula talinayaa inaad akoonkaaga ka furnaato taleefanka iyo kombuyutarka howshan.
Hubi faylka lafdhabarta SMS, waxay noqon kartaa in koodhku jiro. Haddii kale, isku day inaad isticmaasho lambarrada gurmadka in helay marka Waxaan abuuri karaa koontada Instagram, oo aad ka heli doonto qaabeyntaada. Haddii tani kuu shaqeyso, waad awoodaa geli Instagram Koodh xaqiijin ma jiro.
Demi aaladda beddel meesha aad joogto. Dhibaatada ayaa laga yaabaa inay taasi tahay tan jihaynta seenyaalaha.
Haddii mid ka mid ah waxyaabaha kore aaney shaqeyn, isku day ogeysiinta Instagram ka imanaya xarunta caawinta, si ay iyagu kuu siiyaan xallin.
Laakiin haddii aad rabto inaad hagaajiso adiga oo adeegsanaya adigu Kadib isku day ikhtiyaarka soo socda.
Talaabooyinka loo helo lambar xaqiijinta
Xaaladdan oo kale waa inaad isticmaashaa bog bog si aad u heshid farriinta SMS, wac Ku hel SMS khadka tooska ah. Waa kuwee, gabi ahaanba waa bilaash oo uma baahna diiwaangelin. Haddii gelitaanka Instagram adoo aan lahayn lambar xaqiijin ma aha xalka. Nidaamkan ayaa kaa caawin doona, talaabooyinka soo socda.
Waxa ugu horreeya waa in la galo websaydhka Ku hel SMS khadka tooska ah. Markaad gudaha gasho, waxaad arki doontaa liistada lambarro ka yimid waddamo kala duwan iyo tan xigta, farriimaha la helay saacadihii ugu dambeeyay ee 24. Haddaba, riix taleefanka gacanta oo leh farriimo dheeri ah. Shabakada ayaa soo jeedin doonta inaad doorato tirada fariimaha yar, laakiin waxay la shaqeysay kuwa intaas ka sii badan. Hadeyna kuu shaqeynin, isku day lambar taleefan kale, maadaama ay sakhraansan karto ilaa bogga aan la cusbooneysiin.
Ka dib markii aad dooratid, aad bogga soo dhoweynta farriinta, qeybta kore, waxaad arki doontaa lambarka taleefanka. Nuqul ka sameyso oo ay ku jirto calaamadda "+".Markaad tan sameyso, ku dheji daaqadda ku tusi doonta Instagram oo riix "Dir".
Markii lambarka taleefanka la diray, Intagram wuu sii socon doonaa kuu soo dir lambarka xaqiijinta. Waa inaad markaa dib ugu noqotaa bogga soo dhoweynta farriinta oo aad cusboonaysiisaa.
Nuqul koodhka ah
Boggan cusbooneysiinta ah waxaad ka arki kartaa jadwalka hoose, fariimaha ugu dambeeya ee la helay. Waxa ku xiga ee aad sameyn doontid waa nuqul nambar xaqiijinta ee Instagram kuu soo diri doono, kaas oo aad ka heli doontid column of Message. Farriintu waa inay noqotaa kuwa ugu horreeya. Sidoo kale, xaqiiji lambarka sadarka Laga soo bilaabo lambarka noqo 69988.
Ku dhaji koodhka
Si aad u dhammeyso hawsha, ku dhaji koodhkii aad soo guurisay tallaabada hore, bogga aad ku qoratay Instagram-ka. Mar haddii la sameeyo, waad yeelan doontaa koontadaada la xaqiijiyey ee Instagram oo waad awoodi doontaa inaad gasho adigoon dhibaato ku qabin.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso heesaha ugu fiican ee Instagram.
1 Waa maxay lambar xaqiijin?
2 Waa maxay sababta ay dhibaatooyin uga jiraan nambarada xaqiijinta ee kujira Insagram?
3 Gal cinwaanka Instagram adigoon xaqiijin code
4 Talaabooyinka loo helo lambar xaqiijinta
4.4 Nuqul koodhka ah
4.5 Ku dhaji koodhka
Soo degso sheekooyinka Instagram
Habee u hagaaji goobta Instagram